Miyay Liverpool Kaliya Diirada Saari Doontaa Horyaalka Premier League Oo Ay Ka Jeedsan Doonaan Champions League? Tababare Jurgen Klopp Oo Su'aashan Ka Jawaabay. - Gool24.Net
Miyay Liverpool Kaliya Diirada Saari Doontaa Horyaalka Premier League Oo Ay Ka Jeedsan Doonaan Champions League? Tababare Jurgen Klopp Oo Su’aashan Ka Jawaabay.
February 4, 2019 Apdihakem Omer Adem
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ka hadlay haddii kaliya kooxdiisu ay diirada saari doonto tartanka horyaalka Premier League oo ay muhiimad yar siin doonaan Champions League.
Reds ayaa caawa booqan doona Westham United waana kulan bilaw u noqon doono afar toddobaad oo mashquul badan oo ay kooxda Klopp geli doonto iyaga oo kulan Champions League ah la ciyaari doona Bayern Munich sidoo kalena booqan doona Man United iyo Everton.
Horraantii xilli ciyaareedka ayay jireen warar sheegaya in Liverpool ay u fiicnaan doonto inay tartamada Yurub iskaga baxdo sidaa darteed ay noqdaan ku guuleystayasha tartankan maxaliga ah markii ugu horreysay tan iyo 1990.
SIDOO KALE AKHRISO: Khabiir Jamie Redknapp Oo Soo Xushay Shaxda Toddobaadkan Ugu Fiican Horyaalka Premier League - Miyay Kooxdaadu Wax Ciyaartoy Ah Ku Yeelatay?
Dhinaca kale Liverpool ayay dhibaato dhaawacyo ahi ka haleeshay xiddigahooda, Joe Gomez ayaa qaliin mari doona sida kooxdu xaqiijisay sidoo kale Dejan Lovern iyo Alex Arnold ayaa labaduba wali dhaawacyo qabaan.
Klopp ayaa sheegay in kooxdiisu ay labada kooba xooga saarin doonto isla markaana ay isku dayi doonaan labadaba sidii ay xilli ciyaareedkii hore sameeyeen isaga oo dhinaca kale sheegay inuu maqlay dadyaw sheegaya in kooxdiisu ay dhaafi doonto Bayern.
Tababaraha ree Germany ayaa yidhi “Waanu isku day doonaa (Labada Kooba) hubaashii, Sidaasi waa waxa aanu isku daynay sanadkii hore, Sanadkan dadku waxa ay yidhaahdeen waa inaan kaliya diirada saarno horyaalka haatan wali waxaanu ku jirnaa Champions League aad ayaanan ugu faraxsanahay kulan aad u adag”
SIDOO KALE AKHRISO: Shaxda 11-ka Xidig Ee Wali Kooxaha Premier League Ka Bixi Kara Iyo Saamaynta Xun Ee Ay Yeelan Karto.
“Wali waxaan dhagaysanayaa dadka badhkood, Waxa ay xilli horeba u muuqataa inaan gudubnay ‘sababtoo ah kaliya waa Bayern Munich’ waxaanu ku tagi doonaa dhammaan waxa aanu haysano, Taasi waa wax caadi ah”
Halkan Kaga Boggo Kulamada Bishan Ay Liverpool Ciyaari Doonto